Nuur Cadde iyo Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho oo kulan Xasaasi ah yeeshay maanta | maakhir.com
Nuur Cadde iyo Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho oo kulan Xasaasi ah yeeshay maanta
Muqdisho:- Raisalwasaaraha Somaliya Nuur Xasan Xuseen iyo Gudiga Gacansatada ee Suuqa Bakaaraha ayaa maanta waxay shir dheer kuwada qaateen Aqalka Mataxtooyada ee Villa Somaliya halkaasi oo ay aad uga wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa Dhibaatooyinka faraha badan ee ka taagan Suuqaasi.
Kulankaan oo maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Vila Somaliya ayaa waxa uu ahaa mid uu Al,baabada uu xiraan islamarkaan diirada ay ku saareen sida ay wax uga qaban la haayeen amni darada ka jira Suuqa Bakaarah ee magaalada Muqdisho oo maal mihii ugu dambeeyay Suuqaasi lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowlada DFKM .
Nuur Cadde ayaa la sheegay inuu Ganacsatada ka codsaday inay ogalaadaan ciidamada Dawlada Somaliya inay baadhitaano ku sameeyaan suuqaasi si loo soo afmeero Dagaalada Joogtadaha ee ka taagan suuqaasi iyo waliba kooxaha halkaasi ku dhuumaalaysanaya kuwaasi oo Ciidamada Dawlada laga soo riday Hoobiyaasha.
Dhan kale Ganasatadii maanta Nuur Cadde la kulantay ayaa iyaan dhankooda sheegay inay Dawlada Somaliya ay ku haysto Cabudhin xoogan kuwaasi oo dhawor jeer xidhay suuqaasi taasina ay keentay inay Gabi ahaanba is taagaan Hawlihii Ganacsi ee Suuqaasi ka socday.
Waxay sheegeen in loobaahan yahay inay Dawlada Somaliya ay la shaqayso Ganasatada suuqaasi maadaama cashuur fara badan ay ka qaado Dawlada Somaliya.
Isku soo wada duuboo Kulankaasi ayaa ahaa mid aad laysugu af gartay ay dhamaan is gacan qaadeen dadkii ka soo qayb galay shirkaasi.
« Viila Somaliya oo Maanta Hoobiyaal lagu weerarray
Koofi Annan oo sheegay inuu u kala Dab qaaday Masuuliyiinta Dalka Kenya »